नमस्ते डाक्साप !
नमस्ते सिस्टाचारको बिधि पुर्याउने सहज शब्द हो । यो शब्द सर्बब्यापी छ नेपालमा । आफूभन्दा माथिको पदलाई सम्मान स्वरुप नमस्ते भनेर वा गरेर अभिबादन गर्ने चलन छ । नमस्ते नखाइकन र नगरिकन कार्यालयको सुरुवात शायद हुँदैन । पदिय मर्यादाको अस्मिता जोगाउने हिसाबले नमस्ते गरिएको हो । नमस्ते हात मिलाउनु भन्दा बिज्ञानसम्मत भएको कुरा त swine flu को बिगबिगी हुँदा सबैले जानेकै कुरो हो । जे होस् नमस्तेको गरिमा उच्च छ भन्दा फरक नपर्ला । नमस्ते गर्ने मात्रै नभएर नमस्ते फर्काउनुपर्ने पनि हुन्छ । सबै नमस्तेबाट सुरु भएका वार्तालापको अन्त्य प्रिय नै हुन्छन भन्ने छैन । कति "नमस्ते डाक्साप " भनाइमा हर्ष भन्दा तितोपना मिसिएको अनुभुती हुन्छ ।
कार्यालय भित्रका कर्मचारीको नमस्ते आदनप्रदान पछि बिरामीको नमस्ते पनि मनग्गै खान पाइन्छ । सबै नमस्ते गरेर कुर्सिमा बसेका बिरामीले उपचार परामर्श पस्चात नमस्तेको ठाउँमा मनमनै गाली गर्दा हुन् । नगरेर पनि के गरुन् । सन्चारमा सरकारी अस्पातल त सबै निसुल्क हुन्छ भनेर बारम्बार सुनेर आएका हुन्छन्। एक प्रकारले भन्दा केही कुरा निशुल्क हुने सम्प्रेषन भएपनि जनताले त " निशुल्क " मात्रै सम्झिएको र सुनेको हुन्छ । शायद निशुल्क भन्ने शब्द निकै लोकप्रिय ,कर्णप्रिय र सुमधुर सुनिँदो हो । त्यसैले त यो ब्यापक प्रयोग हुन्छ । भन्ने र सुन्नेले यो शब्दमा मात्रै जोड दिन्छ । तर सम्पूर्ण सेवाहरु निशुल्क गर्ने क्षमता सरकारी अस्पातलहरुको छैन। नाफामुखी पो नहुने हो । अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण निशुल्क हुन सक्दैन ।
बिरामी प्रकार १
पूराना पर्चा नल्याइ " नमस्ते डाक्साप ! म त फेरी आएँ । अली सन्चो लागेन । " भन्दै धेरै आउँछन् । सरकारी OPD पुर्जा दुई पाने हुन्छ । OPD को पुर्जा निसुल्क गरेको धेरै बर्ष भयो । निशुल्क हुनु त राम्रो हो । निशुल्कको उपचारमा आफ्नोपन नहुने हो कि विश्वाश नहुने भएर हो बिरामीले त्यो निशुल्क पुर्जामा लेखिएको परामर्श र उपचारको कदर गर्न जान्दैनन् । त्यसैले त औषधी हातमा परेपछि त्यो पुर्जा महत्वहीन हुन्छ । कच्याककुचुक पारिन्छ । त्यो पुर्जा भारी हुन्छ । त्यसको स्याहार भने हुँदैन । पुन: बिरामी भएर आउँदा वा अर्को डाक्टरलाई देखाउदा त्यसको कुनै प्रमाण भेटिन्न । " डाक्साप । हरायो । बिर्सियो । हतारमा छुट्यो " भनेर सहजताका साथ सुन्नुपर्छ । जग्गाको लाल्पुर्जा नलगी मालपोतमा जान्छन र ? अनी शरीरको लालपुर्जा चाँही कती सजिलो गरी बिर्सिने ! । सायद निसुल्क भएर हो कि । थोरै शुल्क लागेमा सम्झिन्थे कि । हुन सक्छ आफ्नो मेडिकल रेकर्ड सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने
चेतना नभएको हो कि । जे भए पनि पूरानो पर्चामा के लेखिएथ्यो भन्ने त याद हुन गार्हो हुन्छ । उहि उपचार पर्‍यो भने " काम छैन त्यो डाक्टरको " भनिहाल्छन् ।
बिरामी प्रकार २
स्या स्या गर्दै दमका बिरामी निशुल्क औषधी पाइने आशाले अस्पातल अाइपुग्छन् । बर्षौको छिप्पिएको दमलाई सरकारले निशुल्क दिने "साल्बुटामोल" को ट्याब्लेटले कती दिनसम्म उपचार हुनसक्ला र ? साल्ब्युटामलले (दममा प्रयोग हुने श्वासनली खुलाइदिने ) केही बर्षपछि काम गर्न छोड्छ । अनी त " नमस्ते डाक्टर साप ! अचेल त छोएन दबाइले " भन्दै बारम्बार आउँछन् । केही औषधी किनेर खानुपर्छ भनेर भन्दा बृद्धलाई त निशुल्क हैन र भनेर प्रतिबाद गर्छन्। मनमनै डाक्टरहरुले लुकाउँदा हुन भन्ने ठान्छन् होला । बुझाउन खोज्यो त संचारमाध्यमलाई नपत्याएर कसरी पत्याउन्थे र अस्पातललाई । कताबाट महिनाको लगभग रु २००० लाग्ने दमको औषधी निशुल्कमा ल्याएर चित्त बुझाउने हो !
बिरामी प्रकार ३
बिरामी जाँचिसकेपछि थाइराइड जाँच गर्नुपर्छ भनेर भन्दा निशुल्क हो भनेर सोध्छन् । निशुल्क त छैन र यहाँ जिल्ला अस्पतालमा हुँदैन भन्दा " नमस्ते डाक्साप ! त्यसो भए म बुटवल गएर चेक गराउँछु । " भनेर बिदा हुन्छन्। सबै प्रकारका ल्याबमा गरिने परिक्षण निशुल्क गर्न अस्पतालले सक्दैन । त्यसैले त बिकास समितीको निर्णय गरेर केही शुल्क तोकिएको हुन्छ । साधारण परिक्षण बाहेकको बिशेष परिक्षण (जस्तै FLP ,TFT )हरु लक्षित बर्गलाई निशुल्क गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने चुनौती छ ।
बिरामी प्रकार ४
" नमस्ते डाक्साप ! मेरो प्रेस्सूरको औषधी सकिएर आया हो । ५ दिन भयो । अस्ती आउँदा सकिएथ्यो । " उच्च रक्तचापको उपचार जडिबुटी र मुख बारेर गर्ने जमात अझै प्रसस्तै छन् । बल्लतल्ल परामर्श गरेर औषधी निशुल्क पाइन्छ भनेर सेवन गर्न मनायो । नियमित सधैं नछोडी खानुपर्ने प्रेस्सरको औषधी बेलामौकामा सकिएर तनाब हुन्छ । कताबाट त्यो निशुल्क सदाबहार नियमित उपलब्ध हुने हो ! प्रेसरलाई काम गर्ने औषधी "यम्लोडिपिन " नामको औषधी सरकारले निशुल्क दिने गरेको छ। जुन कुरा सर्हानिय छ । तर एउटा औषधीले प्रेस्सर नियन्त्रण नभएर अर्को थप्नु पर्‍यो भने निशुल्कमा पाइँदैन । निशुल्क शब्दको छाप बसेको बिरामीले किन्न धौधौ पर्छ ।
संबिधानले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी हकको बारेमा प्रस्टै बोलेको छ । निशुल्क सेवा दिन सक्नु त राज्यको लागि गौरबको बिषय हो । तर निशुल्क शब्दलाई धेरै हल्का रुपले लिएर प्रचार गरिँदा सोझो संपर्कमा बसेर काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक लाई जनाताको आशाअनुसार सेवा पुर्याउन नसक्दा अबिश्वासको बातावरण सिर्जना भएको छ । र स्वास्थ्य सेवाको प्रभाब्कारीता जनता र सेवा प्रदायकबिचको विश्वाशले मजबुत हुन्छ । बर्तमान अवस्थामा जनतामा आशा धेरै बाँडिएको र आशाअनुरुप कार्य हुन नसक्दा जनताबाट "नमस्ते डाक्साप" को लवजमा तितोपना मिसिँदै गएको अनुभब हुन थालेको छ ।
यो तिनपानिको महिमा !
मेरो त गाडी छुट्यो डाक्साप ।
के मेरो बच्चा बाँच्दैन ?
नाडी छाम्ने डाक्टर ।
डाक्टर र पलायन
Training to healthworkers : skill learning or mone...
सलामी पानीको कथा :अनि यसरी भएँ म जनताको प्यारो डाक...
Mental health unaddressed.